Somalia oo dalbatay in cunaqabateynta hubka laga qaado
NEW YORK - Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa khudbada uu ka jeediyay Shirka 73aad ee Qaramada Midoobey uga hadlay horumarada dowladda ka sameysay dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.
Cawad ayaa u sheegay madaxda ka qeybgalaysay kulanka guud ee QM in dowladda Soomaaliya xilligan u baahan tahay in laga qaado xayiraadda dhanka hubka ah ee lagu soo rogay January 1992.
Wuxuu sheegay Wasiirka in Al Shabaab hadda ahayd awoodeeda sidii hore, islamarkaana aysan jirin dhalinyaro badan oo Kooxda ku biiraysa, kadib markii fekerka xagjirka ah laga hor-yimid.
Khudbaddii Wasiir Cawad ee shalay uu ka jeediyay Shirka UN-ka ayaa sidoo kale ku sheegay in dowladda Federaalka ay wada-shaqeyn la sameysay hogaamiyaasha diinta, dhalinyarada, odoyaasha iyo haweenka si looga hortago fekerka Al Shabaab, ee qarxinta iyo dilka ku saleysan.
Cawad ayaa hoosta ka xariiqay in dad badan, oo ay ku jiraan hogaamiyayaal hore Al Shabaab uga soo goostay ay ka faa'idaysteen cafiska Madaxweyne Farmaajo, kadibna ay isku soo dhiibeen si nabad ah dowladda.
Waxa uu Wasiirka carabka ku adkeeyay baaqiisa ah in beesha caalamka, gaar ahaan Gollaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ay cunaqabateynta ka qaadaan Soomaaliya, maadaama dalka uu dagaal kula jiro Al Shabaab, islamarkaana uu doonayo inuu Kooxda ka sifeeyo guud ahaan dalka.
Al Shabaab ayaa isku dayaysa inay afgembiso dowladda Federaalka islamarkaana ay xukunkeeda kusoo rogto guud ahaan dalka, taasoo ay kala kulmeyso is-caabin xooggan.
Beesha caalamka ayaa cabsi ka qabta in hadii xayiraadda laga qaado Soomaliya uu hubka ay soo iibsan doonto dowladda Federaalka uu gacanta u galo Al Shabaab.
Wufuud caalami ah oo soo gaartey Muqdisho iyo ujeedka oo la ogaadey
Soomaliya 26.10.2018. 23:26
Shacabka Muqdisho ayaa walaac ka muujisay wadooyinka laga xiraya marka shirka...
Xasan Daahir oo dhaliilay sida DF u maamushay Kiiska Axmed Dowlo
Soomaliya 28.09.2018. 17:38
Dowladda Soomaaliya oo war kasoo saartey Qaraxii Muqdisho
Soomaliya 02.09.2018. 22:47
Gaari Bullet-proof ah oo lagu rasaaseeyay nawaaxiga Villa Soomaaliya [Sawirro]
Soomaliya 12.03.2018. 11:16
UN-ka oo shaaciyay mashariic $30 million ku baxaysa oo laga fulinayo Somalia
Soomaliya 15.02.2019. 17:21
Farmaajo oo soo saarey Baaq ka dhan ah Al-Shabaab
War Saxaafaded 13.06.2018. 11:41
War Saxaafaded 06.03.2018. 01:18
Maxaa looga hadlay Kulanii Farmaajo iyo Madaxda Midowga Yurub?
War Saxaafaded 29.01.2018. 09:48
Soomaaliya oo habraac cusub dejisay xilli ay dib u fureyso duulimaadyada 04.06.2020. 12:05
Kiisaska Coronavirus ee Somaliland oo qarka u saaran in ay gaaraan 400 04.06.2020. 11:30
Puntland oo shaacisay mowqifkeeda shirkado ay shatiga kala noqotay DF 04.06.2020. 11:05
Al-Shabaab oo weerartay fariisin ay leeyihiin ciidamadda Soomaaliya 04.06.2020. 10:34
Puntland oo muddeysay xilliga ay fureyso duulimaadyadda caalamiga ah 04.06.2020. 09:50
Maamulka Galmudug oo ka warbixiyey dhismaha dekadda Hobyo 04.06.2020. 09:14